NEJ/ ၁၂ မေ ၂၀၀၈
မြန်မာစစ်အစိုးရက ခွင့်ပြုလျှင် မုန်တိုင်းဒုက္ခသည်များအတွက် အသင့်ကူညီနိုင်ရန် အမေရိကန် ရေတပ် စစ်သင်္ဘော (၃) စီး မြန်မာနိုင်ငံသို့ ထွက်ခွာသွားပြီ ဖြစ်သည်။
အမေရိကန် စစ်သင်္ဘော (၃) စီးသည် ယခုအခါ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တွင် ရောက်ရှိနေကြောင်း အမေရိကန် ရေတပ် ဒု- ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Doug Crowder က ပြောသည်။ အမေရိကန် တပ်မ (၇) ရေတပ်မှ ကုန်းရေ နှစ်မျိုးလုံးသုံးနိုင်သည့် စစ်သင်္ဘော (၃) စီး မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဦးတည် ထွက်ခွာ သွားကြောင်း အမေရိကန် ရေတပ် ဒု- ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Doug Crowder က အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဂျကာတာမြို့ရှိ သတင်းထောက်များကို ယခုကဲ့သို့ တနင်္လာနေ့တွင် ပြောခြင်းဖြစ်သည်။
အကူအညီပစ္စည်းများ ပထမဆုံးအကြိမ် တင်ဆောင်လာသည့် အမေရိကန် C-130 စစ်လေယာဉ် တစီး တနင်္လာနေ့တွင် ရန်ကုန်ရောက်ပြီး မကြာခင် အမေရိကန်ရေတပ် စစ်သင်္ဘော(၃) စီး မြန်မာနိုင်ငံသို့ ထွက်ခွာသွားခြင်း ဖြစ်သည်။ မြန်မာစစ်အစိုးရဘက်က အဆိုပါ အမေရိကန်ရေတပ် စစ်သင်္ဘော (၃) စီးကို မြန်မာရေပိုင်နက်သို့ ၀င်ခွင့်ပေး မပေးဆိုသည်ကိုမူ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိရသေးပေ။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 5/12/20080အကြံပြုခြင်း
May 12, 2008 03:22
KYI BUI KHAW, Myanmar - The saffron-robed monks who spearheadedabloody uprising last fall against Myanmar's military rulers are back on the front lines, this time providing food, shelter and spiritual solace to cyclone victims.The military regime has moved to curb the Buddhist clerics' efforts, even as it fails to deliver adequate aid itself. Authorities have given some monasteries deadlines to clear out refugees, many of whom have no homes to return to, monks and survivors say.
Similar scenes are being repeated in other areas of the Irrawaddy delta and Yangon, the country's largest city, where monasteries became safe havens after cyclone Nargis struck May3- and the regime did little.
About 90 of the 120 houses in Kyi Bui Kha have been destroyed. Gaps in the monastery's storm-riddled wooden walls revealeda360-degree view of ravaged rice fields.
U.S. President George W. Bush poses with his daughter Jenna, prior to her wedding to Henry Hager at Prairie Chapel Ranch in Crawford, Texas, May 10, 2008. Photo taken May 10, 2008. (Xinhua/Reuters Photo) ဘုတို့များဆင်းရဲလိုက်တာသမီးမင်္ဂလာဆောင်စိန်လေးတပွင့်တောင်မဆင်နိုင်ရှာဖူး...ဒို့နိုင်ငံကအမီးတော်သံနာစိန်(အဲ)သန္တာရွှေနဲ့တော့ကွာပ။
more picture onHERE
Sgt. Andres Alcaraz/U.S. Marine Corps, via European Pressphoto Agency
UNITED NATIONS — As the authorities in Myanmar raised the cyclone death toll to nearly 32,000 and admitted one American military aircraft with the first delivery of large-scale aid, Secretary General Ban Ki-moon pressed the junta to let international assistance and aid workers into the country without hindrance and expressed “deep concern and immense frustration” with what he called “the unacceptably slow response to this grave humanitarian crisis.”
The director of the United States office of foreign disaster assistance, Ky Luu, said that the United States would rely on aid groups to track the aid, but that there was “massive concern” about whether it would be diverted from those in need, The Associated Press reported.
Still, inasign of the significance of the American aid delivery, the aircraft also carried Adm. Timothy J. Keating, the commander of the United States military in the Pacific.
A government spokesman said that the United States delivery of mosquito nets, blankets and water on Monday would be ferried by Myanmar military helicopters to the worst-hit areas. Two more shipments were scheduled to land Tuesday.By their stubbornness in refusing to allow the rapid distribution of relief supplies, the generals who rule Myanmar are turning the cyclone that struck more thanaweek ago fromadevastating natural disaster intoaman-made disaster of huge proportions.
New York (dpa) - UN Secretary General Ban Ki-moon said Monday that Burma's "unacceptably slow response" to international relief aid has resulted in less than one-third of victims of Cyclone Nargis receiving assistance from the outside. UN officials said the military regime has shown some cooperation 11 days after Nargis hit the country's low-lying southern delta, killing more than 31,000 people, with 34,460 people still missing, according to government figures. But they said the cooperation has been far from adequate.
to see Five Reasons Storms at Deltas Are Especially Deadly click here
နိုင်ငံအ၀ှမ်း ယနေ့ ပြုလုပ်သော အခြေခံဥပဒေမူကြမ်း ဆန္ဒခံယူပွဲတွင် အောက်ပါ အချက်အလက်များ ဖြစ်ပွားသည်ကို မဇ္ဈိမက လေ့လာ တွေ့ရှိရသည်။
(၁) မဲပေးသူများကို ထောက်ခံမဲပေးရန် အတင်းအဓမ္မ ဖိအားပေးခြင်း၊
(၂) မိသားစုဝင် အားလုံးကိုယ်စား တဦးတည်းက မဲပေးနိုင်ခြင်း၊ (အများကိုယ်စား တယောက်တည်းက မဲပေးသည့် စနစ်မျိုးသည် ဘယ်သည့်နေရာတွင်မျှ မရှိပါ၊)
(၃) ရဲနှင့် လုံခြုံရေးများသည် မဲပုံး အနီးအနားတွင် ရပ်စောင့်နေခြင်း၊
(၄) မဲရုံတွင်း၌ လျှို့ဝှက် မဲပေးစနစ် ဖြစ်ခြင်း၊
(၅) နိုင်ငံခြားသားများနှင့် ဒေသခံ သတင်းထောက်များကို မဲရုံအနီးတွင် မတွေ့ရခြင်း၊
(၆) မဲပေးသူများသည် မူကြမ်းပါ အချက်များကို မသိရှိဘဲ မဲပေးနေရခြင်း၊
(၇) ကြိုတင်ဆန္ဒမဲများကို မေလ ၁၀ ရက် မတိုင်ခင် ရက်များအတွင်းက ရယူထားခြင်း၊
(၈) ဒေသခံများသည် မဲရုံသို့ မဲပေးရန် ရောက်လာချိန်တွင် သူတို့၏ အမည်စာရင်းသည် ကြိုတင်မဲပေးသူများ စာရင်းတွင် ပါဝင်ပြီး ဖြစ်နေသည်ကို သိရှိရခြင်း၊
(၉) လုံခြုံရေးများနှင့် မဲရုံ အရာရှိများသည် ထောက်ခံမဲ ပေးရန်သာ တိုက်တွန်းခြင်း၊
(၁၀) တပ်မတော်သားများနှင့် မိသားစုဝင်များကို ထောက်ခံမဲ ပေးရန် တိုက်တွန်းထားခြင်း။
(၁၁) မဲရေတွက်ချိန်တွင် မဲပေးသူများကို မဲရုံများမှ နှင်ထုတ်ပြီး အစိုးရ ထောက်ခံသူများသာ မဲရေတွက်ကြခြင်း။
By BangkokPost.com, Deutsche Presse-Agentur dpa
The Associated Press reported that state-run television inside Burma continuously ran images of elaborate cemonies where top generals - including the junta leader, Senior Gen Than Shwe - handed out boxes of Thai aid disguised so as to appear it came from the junta, to survivors of the tragedy.
Gen Surayud,aformer prime minister, is to fly to Naypyidaw, the Burmese "jungle capital," to do the unthinkable - convince the Burmese generals to allow the world to help the victims ofakiller cyclon.
As an illustration, Gen Surayud will present aid packages provided by the King. On Saturday, His Majesty instructed the Raja Prachanukroh Foundation to send 2,000 bags of utensils and bedding.
The 10 tonnes of subsistence aid was to be flown to Rangoon on Sunday onaRoyal Thai Air Force C-130 cargo plane, said foundation officials.
While aid agencies hashed out terms with the Burmese military regime, the country's rulers pushed througha"sham" referendum intended to cement their political power.
Marcus Prior,aspokesman for the WFP in Bangkok, said: "Given the humanitarian crisis, we felt the need to continue the supplies." The agency was allowed another three air shipments of supplies to Rangoon, scheduled to arrive Saturday and Sunday.
The UN refugee agency, UNHCR, said its first trucks had also arrived in Burma carrying 20 tons of emergency aid - enough to provide shelter for up to 10,000 people.
While aid agencies hashed out terms with the military regime by which the emergency supplies may be released, Burmese rulers pushed througha"sham" referendum Saturday intended to cement their political power.
Meanwhile the military's referendum went ahead despite international appeals to postpone the vote in the wake of Cyclone Nargis that could have killed up to 100,000 people.
Although the junta postponed the vote to May 24 in 47 of the districts worst-hit, including much of the former capital Rangoon, it rejected international appeals forageneral delay.
The referendum process, held under the strict control of the military masters, has been calla"sham" by human rights activists and western democracies for being neither free nor fair.
The country's 400,000-strong military was been given the double task of monitoring the referendum and taking the lead in the distribution of emergency aid.
But in Burma's media-controlled environment most people are unaware of the international furore over the junta's delaying tactics in granting visas to disaster relief experts from the UN and other aid organizations.
These have warned that diphtheria, cholera and malaria could spread in an epidemic of "apocalyptic proportions" if medical, food, water and other types of aid are not allowed in, along with trained personnel to administer the support.
In its latest announcements, the government has confirmed 23,335 deaths and some 37,019 missing. UN officials on Friday estimated the death toll will climb to 63,000 to 100,000 based on reports from 18 aid organizations working in 55 devastated townships.
While aid is trickling in to the Irrawaddy, many people have apparently survived on Buddhist charity this week.
In Labutta, for instance, the population has doubled as refugees seek shelter and food in the relatively large city.
"There is now some aid coming in but many people are relying on the charity of the Burmese families who are residents in Labutta," said Heinke Veit,adirector for the European Commission Humanitarian aid Office (ECHO).
Veit and sources at UNICEF denied reports that cases of cholera had already been detected in the delta area.
"The chief of health operations for UNICEF in Rangoon said there is no evidence of cholera or typhoid yet, although it isaconcern," said Shantha Bloemen,aspokesperson for UNICEF in Bangkok.
France is to make its own aid action for the victims of cyclone Nargis, sending the warship Mistral loading with 1,500 tonnes of goods, it was reported Saturday.
"We have decided to act without waiting any further," French Foreign Minister Bernard Kouchner was quoted by the French daily Le Figaro.
The aid is to be directly distributed to the effected..., either by the ship's crew or by French aid organizations," Kouchner said, adding that "delivering aid directly to (the military) junta doesn't come into the question."
A move by Indonesia to blockaresolution in the United Nations' Security Council over the crisis was "unbelievable and unacceptable," Sunai Phasuk,arepresentative of rights group Human Rights Watch, said Saturday.
ရန်ကုန်တိုင်း လှိုင်သာယာမြို့နယ်အတွင်းရှိ လေဘေးဒဏ်ခံရသည့် နေအိမ်များ အချိန်မီ ပြန် မဆောက်လုပ်နိုင်မီ မိုးရွာနေသဖြင့် လေဘေးဒုက္ခသည်များ နေစရာမရှိဘဲ ဒုက္ခရောက်နေရ သည်ဟု ဒေသခံများက ပြောသည်။လှိုင်သာယာ (၁၈) ရပ်ကွက်တွင် နေထိုင်သူတဦးက “ကျနော်တို့ လှိုင်သာယာမြို့နယ် တမြို့နယ် လုံးမှာ အိမ်ခြေပေါင်း (၁) သောင်းနီးပါးလောက် ပြိုလဲကျသွားတယ်။ ပြိုလဲကျသွားတဲ့ နေရာ တွေမှာ လူတွေ ဒုက္ခတွေ အကြီးအကျယ် ဖြစ်နေတယ်။ ညကဆို ဒီမှာ မိုးရွာတယ်၊ မိုးရွာတော့ ပြန်မဆောက်နိုင်တဲ့ အိမ်တွေကလူတွေ တာပေါ်မှာ အိပ်နေတာ မိုးရွာတော့ ဈေးဆိုင်ခန်းလေး တွေထဲ ၀င်ပုန်းပြီးနေရတော့ အရမ်းဒုက္ခ ရောက်တယ်” ဟု ပြောသည်။
လှိုင်သာယာမြို့နယ်အတွင်း လေဘေးဒုက္ခဒဏ် ဆိုးဆိုးဝါးဝါးခံနေရသည့် နေရာများမှာ ရပ်ကွက် အမှတ် (၁၈၊ ၁၉၊ ၂၀) ရွှေလင်ပန်းရပ်ကွက်နှင့် မကြာသေးခင်က မီးဘေးသင့်ခဲ့သည့် ရေဥက္ကံရပ် ကွက်တို့ဖြစ်ပြီး ရပ်ကွက်နေလူထုမှာ အစားအစာ အခက်အခဲနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်ဟုလည်း သိရသည်။
လှိုင်သာယာ ရေဥက္ကံ အလုပ်သမားရပ်ကွက်တွင် နေထိုင်သူတဦးက “လုပ်ငန်းတွေ ရပ်ဆိုင်းနေ တယ်။ စားသောက်ကုန်ဈေးတွေ မြင့်လာတယ်၊ ၀င်ငွေမရှိတော့ လာပေးတဲ့လူ မျှော်နေရတယ်။ ဆန်ပြုတ်တိုက်တယ်ဆို ဆန်ပြုတ်တိုက်တာကို သွားသောက်ရတယ်။ ထမင်းကြွေးရင် သွားစားရ တယ်။ အဲလိုမျိုး ဖြစ်နေတယ်။ နိုင်ငံတကာအကူညီတွေ လူထုဆီကို လုံးဝရောက်မလာဘူး” ဟု ပြောသည်။
(၁၈) ရပ်ကွက်နေ ပြည်သူလူထု သုံးဆွဲရန် ချပေးထားသည့် ဒီဇယ်ဆီပေပါ (၃) ပေပါကို ရယက ဥက္ကဋ္ဌက ကျပ်ငွေ (၃) သိန်းခွဲဖြင့် ရောင်းစားပစ်လိုက်ကြောင်း၊ မြို့နယ်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီက သွတ် လျှောက်လွှာတစောင်လျှင် ကျပ်ငွေ (၅၀၀) ဖြင့် လျှောက်လွှာများ တင်ခိုင်းသော်လည်း သွတ်ချပေးခြင်း မရှိသေးကြောင်း သိရသည်။
လေဘေးဒုက္ခသည်များအတွက် နိုင်ငံတကာ အကူအညီများ ပေးပို့နေသည်ဟု ကြားသိရသော် လည်း လုံးဝမြင်တွေ့ရခြင်း မရှိသေးကြောင်း၊ လတ်တလော ဆန်တပြည်၊ ဆီ (၂) ကျပ်ခွဲသားနှင့် ဖယောင်းတိုင် (၁) တိုင်သာ အကူအညီ ရရှိကြောင်း လှိုင်သာယာ (၈) ရပ်ကွက်တွင် နေထိုင်သူ တဦးက ပြောသည်။
၎င်းက “၀န်ကြီးချုပ်သိန်းစိန် လာသွားတယ်။ သူလာတော့ စွမ်းအားရှင်နဲ့ ကြံ့ဖွံ့တွေက ကယ်ဆယ် ရေး တဲတွေဆိုပြီး အလုံး (၄၀) လောက်ထိုးချလိုက်တယ်။ ဆန်အိတ် လေးငါးအိတ် ပုံထားလိုက် တယ်။ သိန်းစိန်လည်း ပြန်သွားရော အကုန်လုံး ဖြုတ်ယူသွားရော။ နိုင်ငံတကာအကူအညီတွေ လုံးဝမရောက်ဘူး။ စေတနာရှင်တွေ လာလှူတာတောင်မှ မနေ့ကဆို ရုပ်ရှင်မင်းသား မင်းသမီး
တွေ လာလှူကြတယ်ဗျ။ ဒီမှာ ကြံ့ဖွံ့တွေ၊ ရယကတွေက သူတို့ကို ပေးရမယ်ဆိုလို့ အကုန်လုံး ပြန်ယူသွားလို့ လူထုမှာ ဘာမှမရဘူး” ဟု ပြောသည်။
မြန်မာစစ်အစိုးရကမူ နိုင်ငံတကာ အကူအညီများ ရန်ကုန်လေဆိပ်သို့ ရောက်ရှိလာပုံနှင့် စစ်သား များက လက်ခံ သယ်ယူနေပုံတို့ကို မြန်မာရုပ်မြင်သံကြားမှ အဆက်မပြတ် ထုတ်လွှင့်ပြသလျက် ရှိသည်။ ။